Sida loo yareeyo isticmaalka xogta moobiilka ee YouTube | Androidsis
Sida loo yareeyo isticmaalka xogta moobiilka ee Youtube
YouTube-ka ayaa noqday adeeg loo fidiyo wax walba. Wax kasta oo aad raadineyso, waxaad jawaab ku haysaa qaab muuqaal ah, inkasta oo ay ka duwan tahay mashiinka raadinta, ma ahan fiidiyowyada oo dhan inay noo siiyaan xalal dhab ah waxa aan raadineyno, maaddaama qaarkood ay diiradda saarayaan 'clickbait' si ay u soo jiitaan dadka soo booqda iyada oo aan run ahaantii la siinin xalka dhibaatada.
Haddii aad ka mid tahay kuwa adeegsada YouTube-ka halkii aad ka isticmaali lahayd Google, bil walbana way kaa qaali badan tahay ku dhammeeya heerka heerka xogtaadaWaa inaad siisaa khiyaanada aan kugu tusnay qodobkaan isku day, xeelad kuu oggolaan doonta inaad yareyso xogta moobiilka inta aad isticmaaleyso YouTube.
Barnaamijka YouTube, waxay ku habeysaa tayada daawashada xawaaraha isku xirkeena, markaa sida ay u sarreyso, tayada sare waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku aragno fiidiyowyada taleefannadeenna casriga ah, wax aan jirin oo aan hoos ku sharraxayo.
Si kastaba ha noqotee shaashadaha waaweyn ee taleefannada casriga ah qaarkood, aaladahaas iyagu ma ahan kuwo ku habboon raaxeysiga fiidiyowyada ugu tayada sarreeya barnaamijkan, adigoo ah kombuyuutar ama kiniin ikhtiyaarka ugu fiican. Iyada oo ay taasi jirto, haddii xiriirku fiicanyahay, dalabku wuxuu na tusi doonaa fiidiyowyada HD, shaqo ah nasiib wanaag aan ku xadidi karno kaliya isku xirka Wi-Fi.
Yaree isticmaalka xogta YouTube-ka
Si loo yareeyo isticmaalka xogta ee barnaamijka YouTube, waa inaan gab fursad u ciyaaro HD videos iyada oo loo marayo isku xidhka xogta moobiilka adoo raacaya talaabooyinka aan hoosta kugu tusinayo.
Marka hore, waxaan marin u goobaha ka YouTube oo guji qaabeynta.
Gudaha gudaheeda, waxaan marin u helnaa ikhtiyaarka General.
Gudaha Genera, waa inaan barkinta ka joojino Xaddid xogta moobiilka (Ku ciyaar fiidiyowyada HD kaliya Wi-Fi).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo yareeyo isticmaalka xogta moobiilka ee Youtube
Waad ku mahadsan tahay, waxay ahayd caawimaad weyn. Kuweena aasaasiga u ah halgankaas waxay u baahan yihiin macluumaad noocan ah
Waxaad u adeegsan kartaa amarka codka si aad 'uga wacdo' Kaaliyaha Google labada WhatsApp iyo Duo labadaba
Samsung kama badnaan doonto 300 milyan oo telefoon oo la iibiyay markii ugu horreysay muddo 9 sano ah